Galmudug iyo Puntland oo iska Kaashanaya Sugidda Amniga Magaalada Gaalkacyo – Goobjoog News
Kulan ay magaalada Gaalkacyo ku yeesheen wasiirka amniga Galmudug Axmed Macallin Fiqi iyo wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa waxa ay uga wada hadleen sidii la isaga kaashan lahaa sugidda amniga Gaalkacyo oo maalmihii dambe ay ka dhacayeen falal liddi ku ah nabad gelyada.
Wasiirka Wasaarada arrimaha gudaha Puntland Dhabancad ayaa sheegay inay iskaashi buuxa ka wada Sameeyn doonaan labada maamul Xallinta colaadaha iyo la dagaalanka dagaalamayaasha Al Shabaab.
Wasiirka Wasaarada Amniga Galmudug Axmed Mcallin Fiqi ayaa isna ka warbixiyay ahmiyada ay nabada iyo amnigu ay u leeyihiim shacabka gobalka Mudug,wuxuuna dhanka kale xusay in tallaabo laga qaadayo cid kasta oo gacan saar la leh Al shabaab isaga oo intaas ku daray inay Puntland kala shaqeyn doonaan sugidda amniga magaalada Gaalkacyo.
Sidoo kale wasiir Fiqi ayaa deegaannada Galmudug waxa uu ka mamnuucay waxyaabaha maanka dooriya ee la keeno deegaannadaasi isaga oo sheegay in waxyaabaha maanka dooriya abuuraan xasilooni darro, dilal joogta ah, kufsi iyo colaad.
“Wuxuu maantay si rasmi ah wasiirka amniga gudaha Galmudug uu u mamnuucay ka ganacsiga, keenista, isticmaalka, daabulidda iyo kaydinta Khamriga iyo maandooriyaha oo maleeshiyaadka qaarkood ay si xun u isticmaalaan ka dibna ay abuuraan xasiloonidarro, dilal joogto ah, kufsi, colaado sokeeye iyo xadgudubyo xuquuqda aadanaha ka dhan ah” ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxaya wasaaradda amniga Galmudug.
Magaalada Gaalkacyo ayaa iminka laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo la doonayo in lagu sugo amniga magaaladaasi waxaana dadaalladaasi si xowli ah waxa uga wada wasiirka amniga Galmudug Axmed Macallin Fiqi.